कठै बबुरा पत्रकार ! | परिसंवाद
कठै बबुरा पत्रकार !
गफाष्टक	 आइतबार, कार्तिक १६, २०७७ मा प्रकाशित
लु… झुम्री ! अब दशैं सकियो । तेरो भाइ लाक्पा एक महिनालाई भेडी गोठमा बसी दिन्छु भन्दै थियो । यही मौकामा जौं हामी पनि देशका विभिन्न ठाउँ घुमेर आउँ ! कि के भन्छेस्?
त्यसो नगरौं बुढा ! बरु भेडाको गोठै बेचौं ! अनि त्यही पैसाले यसो ब्यापार व्यवसाय गरेर खाउँला ! कति दुःख गर्नु !
कुरो त ठिकै हो । अहिले कोरोनाको महामारी पनि छ । जोगिनु पनि पर्छ । लु भैगो यो निर्णय पछि गरौंला । बरु अस्ति भिरघरेले आइतबार विहान चिया खान आउँछु भनेको थियो । अहिलेसम्म आको छैन । अनि झुम्री यसो दशैंको रहलपहल छ हैन ! त्यही बनान अलि अलि स्वादले खाउँ !
हौ काका–काकी नमस्कार है । बाटोमा उभिण्डे खोलाका कान्छा बाहुनसंग भेट भयो । यसो बोल्चाल गर्नै प¥यो । उनको कुराले अलमल्यार ढिला भयो ।
हैन के भन्छन् कान्छा बाहुन ?
अब के भन्छन् भन्नु हौ काका ! उनले नबुझेको केही छैन, बुझेको केही होइन । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र सबैको ब्याख्या गरे । केपी ओली, माधव नेपाल पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर, रामचन्द्र सबैको कुण्डली पल्टाए ।
हाम्रो प्रचण्ड काम्रेड र ओलीको बारेमा चैं के भने नि ! हुन त उनी पनि कुण्डली अनुसार भन्दै सुनेको कुरा गर्नेन हुन !
के भन्नु नि ! प्रचण्डको दशा ठिक छैन । अन्तिममा गएर ओली माधव मिल्ने र माओवादीका पनि केही नेता ओलीतिरै लाग्ने संयोग परेको छ भन्थे । अनि मैले पनि प्रचण्डलाई मात्र समयले नेकपालाई नै कन्चट् फुट्ने गरी हानी सक्यो । अब केको ब्यक्तिको कुरो भनिदिएँ ।
तँ पनि वाहुन भन्दा कम छैनस् । नेकपा–लाई खुइल्याउन पाइस भने अरु केही चाहिँदैन । बरु भन उता काठमाडौंमा राजनीति खिचडी कसरी पकाउँदै छन् ।
कसरी पकाउनु भकभक उम्लिए जस्तो देखिन्छ । वाफ भएर उड्छ । केही पाक्तैन । केही भए पो पाकोस् । लौ प्रचण्ड बाउँडिए अरे, माधव नेपाल त उछिट्टिएछन् नि ! अनि ओलीले घुमाए छन् । त्यो नेकपा भन्ने त आज भोलि नै फुट्दै छ । फलानो फलानोलाई मन्त्री बनाउने अरे ! भनेका छन्, लेखेका छन् । वाफरे पत्रकारे हल्ला ।
हाम्रा नेताहरु पनि उस्तै छन् भिरघरे । विचरा पत्रकारहरु पनि जिल्लाराम, महाहराम भएर लेख्छन् । भरे भुत्लोभाङ केही मिल्दैन ।
हैन हौ काका । नेताहरु नै असनको साँढे जस्ता छन् । कुन गल्लीबाट छिरेर कल्लाई हान्छ भन्ने भेउ नै पाइँदैन । हुन चैं केही हुदैन । ठूलो आवाज निकाल्ने दमाहा जस्तो । भित्र खोक्रो, बाहिर बोक्रो ।
वामदेव बड्डाको पनि कुरो हरायो । अब नेकपा र काँग्रेसको पनि लेख्न छोडे हुन्छ । एक थरि लेखक र पत्रकार पनि ओलीको विरोध गर्न खटिएका थिए । अब चैं थाकेकी क्या हो । लेख्न कम गरे ।
पत्रकारहर्ले पचासौं पटक नेकपा फुटाए । अस्तिसम्म जनार्दन, प्रभु साह, पम्फा, सुरेन्द्र, भीम रावलहर्लाई मन्त्री बनार तम्मास गरे । आफंैले अस्ति लेखेको समाचार पढ्दैनन् क्यारे । नत्र थोरै भा पनि लजाउनु पर्ने । लु काका ‘विस्वासनीय सूत्रका अनुसार’ भनेर तिमी नै लेख हौ बरु । ती खैराँते पत्रकारहर्ले भन्दा त राम्रै विश्लेषण गरेर लेख्छौ ।
मैले लेखेर कस्ले छाप्छ र भिरघरे । उता काठमाडौमा बस्ने आफूलाई घघडान लेखक ठान्ने हर्ले लेखेको पो छाप्छ त ।
ती आफूलाई घघडान हुँ भन्नेहरु पनि कि अर्काको विरोधमा कि समर्थनमा लेख्छन् । कताबाट झार्नु पर्ने हो त्यताको समर्थनमा आफ्नो विवेकसमेत
सिरानी मुनी राखेर बजारु बनेर लखर लखर भट्टी छिर्छन् । बरु तिमी लेख म छाप्न पठाई दिन्छु ।
ठिकै छ म सोचेर लेखौला नि त ! अहिले भने अनलाईन पोर्टलमा आएका समाचार केके छन् त्यो चैं एकसरो सुनान त !
५/७ वटा बाहेक अरु अनलाईन नहेरे पनि हुन्छ क्या काका ! बालुवाटारको डिजाइन थाहा पाएपछि प्रचण्ड बिलखबन्दमा, नारायणकाजीको स्टाटस्ले बालुवाटारमा खैला बैला, प्रधानमन्त्री झस्किए जस्ता हेडलाईन भएका नखोल्नु, नपढ्नु ! ‘आयो यस्तो निर्णय,’ ‘भयो यस्तो हलचल’ भनेर हेडलाइनमा लेखेको छ भने त्यो ठगले लेखेको भनेर बुझे हुन्छ ।
होइन भतिज ! त्यस्तो लेख्ने सबै दमाहा हुन त !
हो काका ! त्यसैले त म भन्दै छु तिमी हामीले जति विश्लेषण गर्न पनि ती बबुराहर्ले सक्तैनन् । हावाको भरमा समाचार लेखेर हामी जस्तालाई बेकुफ बनाउँछन् । तिनार्ले अनुमानका भरमा लेखेका समाचार भन्दा तिमी हामीले विश्लेषण गरेकै कुरा पुगी रा छ ।
यहाँ त तैले र मैले भन्दा पनि तेरो काकी झुम्रीले गरेको राजनीति विश्लेषण ३ वर्ष अघिदेखि ठ्याक्कै मिलिरा छ ।
हो नि काका ! काँग्रेसमा देउवा र नेकपामा ओली हुन्जेल कसैको दाल गल्दैन । बिरालाले खाँबो कोपरेर केही हुनेवाला छैन । काका ! म घरतिर लाग्छु अब । फेरि समय मिलार आउँला ।